Delta 'kudyidzana neTSA inowedzeredza kupinda-mukati, chengetedzo muAtlanta hub
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Delta 'kudyidzana neTSA inowedzeredza kupinda-mukati, chengetedzo muAtlanta hub
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Maindasitiri-anotungamira sarudzo yeDelta's TSA PreCheck vatengi vanoshandisa tekinoroji yekumeso kumeso kugadzirisa chiitiko cheairport kubva pamharadzano kusvika pasuwo.
Tekinoroji nyowani iri kupa vatengi nzira inoshanda kwazvo yekufamba nendege - pasina kuratidza pepa rekukwirisa pepa kana ID yehurumende chaiyo.
Chitupa chemutengi chevatengi chinoumbwa nenhamba yavo yepasipoti uye TSA PreCheck kana Global Kupinda Inozivikanwa Yekufamba Nhamba uye inosimbiswa nehunyanzvi hwekuziva tekinoroji.
Chiso chinozivikanwa michina ichatanga kuoneka muAtlanta yeSouth Security Checkpoint mumavhiki anotevera.
Vanofamba nendege vane TSA PreCheck nhengo uye nhamba yeDelta SkyMiles, vangangove nemukana wekuwana rwendo rwekukurumidza nendege ku Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.
Kutanga kuvhurwa muDetroit yekuchengetedza nzvimbo dzekuongorora mukutanga kwa2021, Delta Air'ruzivo rwekuzivikanwa kwedhijitari indasitiri yekutanga mukudyidzana kwakasarudzika neTSA PreCheck. Icho chiitiko chiri kuwedzera kusvika Atlanta, ichipa vatengi nzira inoshanda kwazvo yekufamba nendege - pasina kuratidza pepa rekukwirisa pepa kana chitupa chehurumende chaicho. Nekutarisa kumwe chete kamera, vatengi vanokodzera uye vanopinda mukati vanogona nyore uye nemazvo kutarisa bhegi, kupfuura nepakati tsa PreCheck yekuchengetedza tambo uye kukwira ndege yavo.
Chitupa chemutengi chevatengi chinoumbwa nenhamba yavo yepasipoti uye tsa PreCheck kana Global Kupinda Inozivikanwa Yekufamba Nhamba uye inosimbiswa nehunyanzvi hwekuona tekinoroji, iyo inosimbisa mufambi kuzivikanwa panhandare yendege yekubata. Chiso chinozivikanwa michina inotanga kuoneka mukati Atlanta'S South Security Checkpoint mumavhiki anotevera uye ichawedzera kusarudza mabhegi kudonhedza uye nzvimbo dzekubhodha gore risati rapera. Delta Air inovavarira kuwedzera kune mamwe mahabhu gore rinouya kuti ive nechokwadi chekushomeka, chisina kubata chiitiko chekufamba kune yedu network.
"Kuwedzera kwakasarudzika kwekuzivikanwa kwedhijitari kunofambisa Delta nhanho imwe padhuze nekuzadzisa chiratidzo chedu chekugadzira rwendo rwakafarirana uye rwakabatana," akadaro Byron Merritt, Delta Air'Mutevedzeri weMutungamiriri weBrand Experience Dhizaini. "Chinangwa chedu mukushandura nguva dzakakosha senge kuchengetedzeka uye kupinda-mukati kuzviitiko zvisina musono kupa nguva uye kutarisa kumashure kunguva dzinonakidzwa nevatengi. Kugadziridza senge kuzivikanwa kwedhijitari kunoitwa nechinangwa chekushandura ruzivo rwekufamba rwakabatana kuva rwendo urwo vatengi vedu vanogona kutarisira. ”
Muzvose Atlanta uye Detroit, yekuzivikanwa kwedhijitari inovaka pane yakasarudzika kumeso sarudzo yeDelta yekufamba kwenyika, iyo Delta yakatanga kuyedza anopfuura makore mashanu apfuura uye yakaguma nekutangwa kweyekutanga yakazara biometric terminal muAtlanta muna 2018.
Mound Zidone anoti:
Gunyana 20, 2021 pa 16: 24
Ingo tarisa munhoroondo uye uratidze dzimwe nyika ..."Kureruka" uye "rubatsiro kune vatengi" ndiyo nzira iyo China yakatengesa kuzivikanwa kwayo kwechiso mu "smart maguta" uye kiredhiti rating rating system kuita vagari vayo nhapwa.